YEYINTNGE(CANADA): Monday, September 12
ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီးတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူ မရှိတော့ဘူး
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း ခင်ဗျား
တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန် ၆နှစ်အကြာမှာ လူကြီးမင်းဟာ ” မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီးတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူ မရှိတော့ဘူး” ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ရှင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ဖတ်ရှု မှတ်သားရပါသဖြင့် လူကြီးမင်း၏ အရည်အချင်းအား လေးစားမိပါသည်။
မြန်မာပြည်၏ မြောက်ဖက်ဖျားမှနေကာ ဧရာဝတီမြစ် တကြောလုံးရှိ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့၏ အသက်အိုးအိမ်ကို ခြိမ်းခြောက်ဖျက်စီးပစ်နိုင်သော စီမံကိန်းကြီးတခုအား တိုင်းတပါးလက်သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးအပ်လိုက်သော လူကြီးမင်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လူကြီးမင်းတို့ ပါတီ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ကြွေးကြော်ထားဆဲ ဖြစ်သော စီးပွားရေး ဦးတည်ချက်များမှ “နိုင်ငံတော် စီးပွားရေးတစ်ရပ်လုံးကို ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းအားသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိရေး” ဟူသော အချက်ကို မည်သို့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသလဲဆိုတာကိုလည်း သိချင်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/12/2011 1 အကြံပြုခြင်း
ခေတ်ကြီးကအွန်လိုင်းခေတ် ဆိုတော့ တနေ့ တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်တော့ အီးမေးထဲအလျှံပယ်ဝင်လာတဲ့ သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ ဆွေးနွေးချက်တွေ၊ ကြော်ငြာတွေထဲက စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ကိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ရတဲ့အခါတော့လည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ တွေးမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပေါ်မှာ စာကောက်ရေးဖြစ်၊ ဆွေး နွေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း အများဒကာပြောနေကြလို့ ရခိုင်ပြည်တွင်းကလူမျိုးရေးကိစ္စ သိမိ ကြားမိ တွေးမိ တာလေး ရေးလိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျိုးစုများအရေး စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်တွင်းက ဘင်္ဂါလီလို့ ရခိုင်များကဆိုတဲ့ (ရိုဟင် ဂျာ) ဆိုသူတွေရဲ့ အရေးကလည်း ခြွင်းချန်ထားလို့မရဘူးဆိုတာ ၁၉၉၀-၉၁ ခုနှစ်လောက်က မာနယ် ပလော မှာ ရခိုင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေကြီး ခိုင်စောထွန်းနဲ့ လူမျိုးစုအရေး စကားစပ်မိပြောဆို ဆွေးနွေးမိကြတုန်းကတည်းက မြင်မိခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တုံးကတော့ (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုတာကော သူတို့ရဲ့ဒုက္ခသုက္ခ ကော၊ မြန်မာပြည်သူ အများစုက မသိကြ၊ (အထူးသဖြင့် ဦးနေဝင်းရဲ့အမှောင်ချခေတ် မျိုးဆက်လူငယ်များ က ပို၍မသိကြ) မကြားဖူးကြပါဘူး၊ သိကြသူအနည်းအကျဉ်းတို့ကလည်း၊ သာမန်အားဖြင့်တော့ ဒါ ရခိုင်ပြည် တွင်းကိစ္စ၊ ရခိုင်တွေသာ အသိဆုံး၊ ရခိုင်အမျိုးသားတွေကဘဲဖြေရှင်းရမဲ့ကိစ္စဆိုပြီး ဖာသိဖာသာနေကြပါတယ်။ အခုတော့ သူတို့ကိစ္စဟာ နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ တွေ၊ အဲန်ဂျီအိုတွေ၊ အပြင် ကုလသမဂ အထိပါသိလာကြပါတယ်။ မသိတာတွေ မသိသလိုပျောက် ကွယ်မ သွားဘဲ၊ သိလာတာကိုက သတိမူသင့် အလေးထားသင့် တဲ့အချက်လို့ဆိုရမှာပါ။
တဖက်မှာတော့ သူတို့တွေရဲ့ ဒုက္ခသုက္ခကို စာနာသူတွေ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း မှာကော မြန်မာလူမျိုး ထဲမှာပါပို ပိုလာတာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေတောင်မှ (ရိုဟင်ဂျာ)တို့ရဲ့ ဒုက္ခ သုက္ခကို အများနည်းတူ စာနာမှုရှိ ကြပါတယ်လို့ပြောရင် လွန်ရာကျမယ်မထင်ပါဘူး။ တဖန် ဒီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေဟာ ရခိုင်တွေနဲ့ တမြေထဲနေ၊ တရေထဲသောက်၊ ရခိုင်ပြည်တိုးတက်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်အရေးကိုအတူတကွဆောင်ရွက် ကြရမယ်လို့ သဘောပိုက်ထားတဲ့ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များလည်းအများအပြားရှိကြပါတယ်။ ရခိုင်တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး ခိုင်မိုးလင်းရဲ့တပ်ထဲမှာ (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုသူများပါဝင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်၊ ဥက္ကဌ ခိုင်မိုးလင်း ကျဆုံးမှုနဲ့အတူ သူတို့တွေလည်း ရခိုင်ပြည်အတွက် အသက်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်၊ ဦးကျော်လှက အဲမ်အယ်လ် အို ဆိုပြီးပြောင်းမဖွဲ့ခင်၊ အေအယ်အို (Arakan Liberation Organization)ကိုဖွဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ရခိုင် ဗုဒ္မွဘာသာတွေ နဲ့ပေါင်းဖွဲ့ ခဲ့တာလို့ဆိုတယ်။
စစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်အရေး ကိစ္စဆောင်ရွက်ရေးတွေမှာ ရခိုင်ပြည် အ တွင်းက အင်အားစုများဖြင့် စုစည်းဖေါ်ဆောင်ရမယ်လို့ ယူဆထားပုံရတဲ့ NUPA အဖွဲ့က (ရိုဟင်ဂျာ)အဖွဲ့များနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထား တာရှိသလို၊ (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုတဲ့ နာမယ်က တကဏ္ဍထား၊ သူတို့ဟာ နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီး ရခိုင် ပြည်အတွင်းမှာ အတူနေလာကြတဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်။ လူမျိုးမတူ၊ ဘာသာမတူတာက အကြောင်းမဟုတ် ငြိမ်း ငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိဖို့က အဓိကလို့ အယူအဆရှိသူ တသီးပုဂလ များကလည် အတူနေကြဖို့ဝန်မလေးကြပါဘူးတဲ့။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်စစ်ပွဲရဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်ရပ်တည်မှုအပေါ်က ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ ကိုအခြေပြုပြီး၊ လူမျိုးမတူ၊ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမတူတဲ့ လူမျိုးနှစ်မျိုးအကြား အဖုအထစ်တွေက၊ သေး လိုက်၊ ကြီးလိုက်နဲ့သံသယတွေကြီးထွားပြီး ပျောက်ကင်းအောင်မကုနိုင်တဲ့ ရောဂါဆိုးလိုဖြစ်လာနေတာဘဲဖြစ် တယ် ။
ပြောရရင် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘက်ကို (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုသူတွေက ရပ်တည်တယ်။ ဂျပန်တွေကို ရခိုင် များကကူတယ်။ ဒါနဲ့လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းဖြစ်ခဲ့တယ် လို့ဆိုတယ်။ တခါ လွတ်လပ်ရေးရခါနီးတော့၊ ( ရိုဟင် ဂျာ)ဆိုသူ အစွန်းရောက်ထဲက တချို့က မူဂျာဟစ်ဆိုပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တယ်။ အဲဒီတုန်းက အိန္ဒိယ ထဲကနေ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဆိုပြီး ခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ မွတ်စလင်အများစုရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်နဲ့ နယ်စပ်ဖြစ်နေတဲ့ အရှေ့ ဘင်္ဂလားနယ်ကို ပါကစ္စထဲထည့်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှတချို့လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် များကလည်း သီးခြားလွတ်လပ်ရေးယူဖို့ ပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ မူဂျာဟစ်ခေါင်းဆောင်တချို့ က လည်း အဲ ဒါကိုအားကျပြီး မွတ်စလင်ပြည်ထူထောင်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒါ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အ တွင်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခအရှိန် မကုန်သေးလို့ အစွန်းရောက်တဲ့လူတစုရဲ့ အစီအမံဖြစ်တယ်လို့ဆို တယ်။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါက ကြီးမားတဲ့ အဖုအထစ်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါ ဦးနုခေတ်မှာတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးက မူဂျာဟစ် လက်နက်ကိုင်ကိစ္စ သွား ရောက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ ဒီမှာ သူတို့က သူတို့ကို ဘင်္ဂါလီခေါ်တာ ကိုမကြိုက်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂါလီ မဟုတ် ကြောင်း (ရိုဟင်ဂျာ)လို့သာ ခေါ်ဖို့တင်ပြတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒီတင်ပြချက်အရ သူတို့ကိုဦးနု အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဆိုပြီး တရားဝင်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပုံရပါတယ်။ ဦးနုအစိုးရ အနေနဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်မှု ကိစ္စ ရပ်တစ်ခုကို ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပေမဲ့၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တဲ့ ရခိုင်အမျိုးသား တချို့က တော့ သဘောမတွေ့နိုင်မှာအမှန်ပါ။
၁၉၆၁ ခုနှစ်ကုန်လောက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတော့ တချို့ရခိုင်အမျိုးသားတွေက ခွဲထွက် ခွင့်ကိုပါအခြေခံဥပဒေမှာထည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဒေသ က ဒေသခံတွေ(အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေ) နှင့် သံတွဲခရိုင် ဒေသခံများက ရခိုင်ပြည် နယ်ထဲကို သူတို့ဒေသ တွေမထည့်ဘဲ၊ ပြည်မနှင့်တွဲဘက်ထားပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ ဒါကလည်း (ရိုဟင်ဂျာ) နဲ့ ရခိုင်တို့အကြား ရှိနေတဲ့ အဖုအထစ်အတွက် မြေသြဇာထည့် ရေလောင်းပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်။ ပြည်နယ်များမဖွဲ့စည်းနိုင် သေးခင်မှာဘဲ ဦးနေဝင်း အာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဦးနေဝင်း အာဏာသိမ်းပြီးသည့်နောက်ပိုင်းမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးအောင်ကြီးတို့ (ရိုဟင် ဂျာကို အသိအမှတ်ပြုရေးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသူများ) ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရစဉ်၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်လောက်က စ ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမှ ဦးနေဝင်းက ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဦးနုခေတ်မှာ ရခိုင် အမျိုးသားများ ပြည်နယ်တောင်းစဉ်က ခွဲထွက်ခွင့်ကိုပါတောင်တာကို ဦးနေဝင်းက သတိပြုပြီး၊ ရခိုင်အမျိုးသား များကို နှစ်သိမ့်ဖို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တချို့သို့မဟုတ် ဒေါက်တာအေးကျော်လို ပညာရှင်က ဦးနေဝင်းကို ချဉ်းကပ်တောင်းဆိုလို့လားတော့မသိပါ၊ (ရိုဟင်ဂျာ) ကိုတိုင်းရင်းသား အဖြစ်က ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါ တယ်။ ဦးနေဝင်းက ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများကျေနပ်အောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောမြို့နယ်နှင့်၊ သံတွဲဒေသများပါဝင်သော ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ပါတယ်၊ ရခိုင်အမျိုးသားများအနေနှင့် ပြည် နယ်တော့ ရလိုက်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဦးနေဝင်းသဘောကျ အုပ်ချုပ်တာပါ။
ရခိုင်ပြည်ကိစ္စမှာလည်း အဖုအထစ်များနဲ့ အက်ကြောင်းထင်နေတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်သူများနဲ့ (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုသူအစွန်းရောက်တို့အကြား ကျားကွက်ရွေ့နေပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်သူ များကျေနပ် အောင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို မောင်းထုတ်ပြလိုက်၊ ပြန်ခေါ်လိုက်နဲ့ ကုလသမဂ ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး အစီအစဉ်က လာတဲ့နိုင်ငံခြားငွေများကို အထက်လည်းအထက်အလိုက်၊ အောက်ကလည်း အောက် အလိုက် ဗိုက်မဆန့်၊ အိတ်မဆန့် လောက်အောင်ထည့်ကြတယ်လို့ ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ထရန်စ်ပဲရင့်စီ တို့ အကောင်တီဘီလီတီတို့ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့တာဘဲ၊ နိုင်ငံခြားငွေက သူတို့ဘဲ ကိုင်ခွင့်ရှိတာဘဲ။ ဒီကြားထဲ ငွေယူလူသွင်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒါကို ရခိုင်အမျိုးသားများအောင့်သက်သက်နဲ့ခံနေရသလို၊ (ရိုဟင်ဂျာ) ဆိုသူများ ခမြာလည်း ဇကောထဲ လောက်စလုံး ထည့်လိမ့်သလို အလူးအလဲခံနေရပါတယ်။
ဦးနေဝင်းခေတ်မှာ (ရိုဟင်ဂျာ) ဆိုတာကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့ (ရိုဟင်ဂျာ) လက်နက်ကိုင်တွေ ထပ်ပေါ် လာပါတယ်။ ဒီတော့ (ရိုဟင်ဂျာ) လက်နက်ကိုင်များနဲ့ ရခိုင်အမျိုးသား လက်နက်ကိုင်များအကြား ထပ်မံပေါ် လာတဲ့ နယ်မြေကိစ္စ၊ လက်နက်ကိစ္စ စတဲ့ပဋိပက္ခ ကလေးတွေကလည်း၊ ဆိုခဲ့တဲ့ အဖုအထစ်များကို အစိုင်အခဲ ဖြစ် စေလာပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ ရခိုင်အမျိုးသားများက (ရိုဟင်ဂျာ) ဆိုတာဟာ ဘင်္ဂါလီတွေ ပါလို့ တွင်တွင်ပြောနေပါတယ်။ သူတို့ပြောတာ သဘာဝကျတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုသူတွေ ပြောတဲ့ စကားက ဘင်္ဂါလီနွယ်တဲ့စကား(ဒိုင်ယာလက်စကား)၊ နေထိုင်တဲ့အရပ်က ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နယ်နိမိတ်နဲ့ နယ်စပ် ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ။ ဘင်္ဂလာဒေရှ့် ဆိုတာက စစ်တကောင်း တောင်တန်းပါဝင်တဲ့ တချိန်ကအရှေ့ဘင်္ဂေါလ်ပြည်ပါ။ အနောက်ဘင်္ဂေါလ်ပြည်က လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပါ။ အရှေ့ ဘင်္ဂေါလ် ကော အနောက်ဘင်္ဂေါလ်ကော အဓိကအားဖြင့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြတာပါ။ စကားအား ဖြင့်က တော့ ဒိုင်ယာလက်ခွဲတွေအများကြီးပါ။ ဘာသာကတော့ အရှေ့ဘင်္ဂေါလ်(ဘင်္ဂလာဒေရှ်)က ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် များတယ်၊ ဘင်္ဂါလီဗုဒ္မွဘာသာ၊ ဘင်္ဂါလီဟိန္ဒူ နဲ့ ဘင်္ဂါလီ ခရစ်ယာန်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အနောက် ဘင်္ဂေါလ် ပြည်နယ်မှာတော့ ဟိန္ဒူနဲ့ ဗုဒ္မွဘာသာဘင်္ဂါလီက ပိုများပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ စစ်တကောင်းတောင် တန်းဒေသအပါအဝင် ဘင်္ဂေါလ် ၁၂ မြို့ကို ရခိုင်ဘုရင်များ နဲ့ ဘင်္ဂလားဘုရင်များ ဘတပြန်ကျားတပြန် မင်းလုပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာ အထင်အရှားရှိပါတယ်။ ရခိုင်တွေက ဗမာပြည်ကိုလာ ရောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ အကြိမ်ရေ ရှားပေမဲ့ စစ်တကောင်းပြည်ကို သွားအုပ်ချုပ်တဲ့ အကြိမ်ရေကများပုံရပါတယ်။ ရခိုင်ဘုရင်များဟာ မွတ်စလင်ဘွဲ့အမည် ခံယူအုပ်ချုပ်ခဲ့တာတွေလည်း ရခိုင်သမိုင်းမှာရှိပါခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်း ကြောင်းအရကလည်း ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်။ နယ်စပ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ ဟိုဘက်ဒီ ဘက်နှစ်နိုင်ငံ ခွရှိနေတတ်တာကတော့ သဘာဝ တော့ကျပါတယ်။
ချင်းလူမျိုးတွေ နယ်မြေဆက်စပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းမှာကော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားတွေအဖြစ် ရှိနေတယ်ဆိုရင်၊ ကချင်လူမျိုးတွေ၊ ဝလူမျိုးတွေ တရုပ်ပြည်ထဲမှာကော မြန်မာနိုင်ငံထဲ မှာပါ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားတွေအဖြစ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်၊ ဘင်္ဂါလီဆိုတာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာကော ဘင်္ဂလာဒေရှ့်ထဲမှာကော သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ငြင်းရင်ကော လက်တွေ့ ကျ မလား၊ သဘာဝကျမလားဆိုတာ စဉ်းစားဘွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က တဖက်က ဘင်္ဂါလီများနဲ့ ပြောစကား ဒိုင်ယာလက် မတူတဲ့အတွက် ဟိုဘက်က လူများနဲ့ သီးခြားဖြစ် ချင် လို့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ (ရိုဟင်ဂျာ) လို့ပြောင်းလဲ ခေါ်စေလိုတဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ သူတို့က ပိုအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ နောက်တခုက ဘင်္ဂါလီလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင် သူတို့ကို နိုင်ငံခြားသားတံဆိပ်ကပ် ပြီးတွန်းပို့မှာ စိုးရိမ်ပုံရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က (ရိုဟင်ဂျာ) ဆိုသူပညာတတ်လူငယ် တစ်ယောက် နဲ့စကားပြောကြည့်တုံးက၊ ..ခင်ဗျားတို့က ရခိုင်အမျိုးသားတွေနဲ့နီးနီးစပ်စပ် ရင်းရင်းနှီးနှီး နေဖို့လိုတာပေါ့…လို့ ကျနော်ပြောတော့၊… ဒီလူငယ်ပြန်ပြောတာက …ကျနော်တို့က နေချင်ပါတယ်..နေတယ်… သူတို့က ကျနော်တို့ ကို တခါတည်းအမျိုးပါပြုတ်အောင် ဘင်္ဂါလီကုလား၊ နိုင်ငံခြားသားဆိုပြီး မောင်းထုတ်နေတယ်လေ…ဗမာကိုခေါ် တယ်၊ ဗမာစစ်တပ်ကိုခေါ်တယ်၊ ကျနော်တို့ကို မောင်းထုတ်တယ်။ ကျနော်တို့က ဒုက္ခတော့ရောက်တယ်လေ… ဒါပေမဲ့ မပြုတ်ဘူး.. သူတို့က ဒုက္ခမရောက်ဘူး… တဖြည်းဖြည်းကုန်လာပြီ..တဲ့။ အင်း…စဉ်းစားစရာတော့ ကောင်းသား။
၉၂ ခုနှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်၊ ချင်းမိုင်မှာ လူအခွင့်အရေးသင်တန်းတစ်ခုမှာ ဆရာဦးတင့်ဇော်က ဘာသာပြန်လုပ်ပေးနေတုန်း သူနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စမေးမြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဦးတင့်ဇော် ရှင်းပြတာက ရခိုင်ပြည်မှာ ရှေး အစဉ်အဆက်ကတည်းက မွတ်စလင်တွေ အတူတကွ နေထိုင်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ ငြင်းဘွယ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။ ရှေးက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမရှိဘူး၊ လူဦးရေကလည်း ရှိသင့်တယ်ထင်တာထက် များနေတယ်လို့ဆိုတယ်။ တချို့ကတော့ ၁၉၇၈ ခုနှစ် နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးတုန်းက ထွက်သွားတာထက် ပြန်လက်ခံလိုက်ရတာက ပိုများတယ်လို့ဆိုတယ်။ ကိုယ့်ဆီကမဟုတ်ရင် ငြင်းခွင့်ရှိတာဘဲ (များများလက်ခံလေ ကုလသမဂ ဒုက္ခသည် ပြန်လက်ခံရေး အစီအစဉ်အရပေးတဲ့ဒေါ်လာ ငွေပိုရလေလေ ကြောင့်များလားမသိပါ။)
(ရိုဟင်ဂျာ) ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း လက်ခံခြင်း၊ မခံခြင်း အငြင်းပွားကိစ္စကို ကျနော်အနေနဲ့ ထောက်ခံခြင်း၊ ကန့်ကွက် ခြင်း မလုပ်ခဲ့ပါ။ အခုလည်းလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာ့ကြောင့် လဲဆိုတော့ ရှေ့နေကြီး ခိုင်စောထွန်း ရဲ့စကား အသွားအလာ ကိုသတိပြုမိပြီးသကာလ ဒီလူမျိုးစုနှစ်စု(ရခိုင်နှင့်ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတို့) တချိန်ချိန်မှာ နားလည်မှုရ ပြေလည်သွားခဲ့ကြရင် ကြားထဲကကျနော်များတို့ ငပေါကြီး ဖြစ်ကျန်ခဲ့မှာစိုးတာကြောင့်၊ ပြီးတော့ ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီးကျနော် ထောက်ခံမိ(သို့မဟုတ်)မထောက်ခံမိတာ မှားပါတယ်လို့ စိတ်တွင်းကသော် လည်း ကောင်း၊ အပြင်ပန်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း တောင်းပန်ရမဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ခြင်တာကြောင့်လို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ကောင်းသောအကြံပြုခြင်းအားဖြင့် အားလုံးနှင့် ထာဝရမိတ်ဆွေ ညီနောင်များအဖြစ်သာနေလို၍ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုအကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။ အထက်တွင် ဆိုခဲ့သည့် အဖုအထစ်တွေရောဂါကြီး ပျောက်ကင်းဖို့ ဆို ရင် လက်ရှိသွားနေတဲ့နည်းလမ်းက နိုင်ငံရေးအသပြာဆရာဝန်ကို အားထားကုနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ပျောက် တော့ပျောက်မယ်။ ရောဂါရော လူနာရော တပါတည်းပါ။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်ညီနောင်အနေဖြင့် ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများ အချင်းချင်းအတွင်း ကိန်းအောင်းနေတဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အစွဲအလမ်းတွေ၊ အာဃာတ တွေ၊ သံသယတွေ၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဘေးဖယ်ထုတ်ပြီး အရင်းအမြစ်ကို ဓမ္မဒိဌာန်ကျကျ စဉ်းစားအဖြေရှာပါမှ ရခိုင်ပြည်သူတရပ်လုံး ငြိမ်းချမ်းသာယာရေး၊ တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို အားသွန်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမည် သာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ ဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စား ဆွေးနွေးနေသူများအနေဖြင့်လည်း၊ ရခိုင်ပြည်သူ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများ စုစည်းညီညွတ်လျှက်၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသောဒေသသူ ဒေသသားများအဖြစ်ရောက်ကြရလေ အောင် အပြုသဘောဖြင့် အလေးအနက်ထား စဉ်းစားဆွေးနွေးပေး သင့်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ရပါ တယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/12/20110အကြံပြုခြင်း
12 Sep2011 Yeyintnge's Diary
မြန်မာ့ဟက်ကင်းလောက တိုးတက်စေရန်အတွက် သင်၏ Hacking Skill အား မျှဝေရန်နှင့် တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး BHG Chat Room အား ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါသည်။ chat room အတွင်းဝင်ရောက်ရန် Register ၁ ကြိမ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Register လုပ်ရန်အတွက် မိမိတို့ တခါမှ မသုံးဖူးသည့် Password ကို အသုံးပြုပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
Chat Room Link, Powered By Blab! lite
We all are shadow..
We all are everyone..
Anyone can be one us......
Black, White or Gray...whatever u are,
if you hacked under by BHG name... you are one of us.
Our BHG site is place to show off your deface and leak the information you hack... We will give you full credit..
You can send your Defaced Page to blinkhackergroup@gmail.com
Your Defaced Link and
Your Defaced Page Screen Shoot.
To consider our group,
We don't need your personal information,
We don't need application form....
We respect your privacy .....
သီးလေးသီး ပြန်လာတော့မယ်လို့The Voice ဂျာနယ်မှာဖေါ်ပြထားတယ်။ ဒီဂျာနယ်က ဘယ်လိုဂျာနယ်လဲ။
ဒီဂျာနယ်က ကြံ့ဖွတ်အစိုးရနဲ့အလိုကျသတင်းလေးတွေကိုပဲ ဖေါ်ပြနေကြဂျာနယ်ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့
အစိုးရခွင့်မပြုဘဲသတင်းဂျာနယ်တွေကထုတ်ပြန်လို့မရဘူး၊ ပြည်သူတွေသိအောင်သတင်းဂျာတယ်တွေမှာ၊နောက်ပြီးအစိုးရပိုင်သတင်းစာတွေမှာသတင်းအဖြစ်ဝေဝေဆာဆာတွေ့ရလိမ့်မယ်စိတ်သာချ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကိုပုံကြီးနဲ့ဖေါ်ပြလို့ Messenger ဂျာနယ်ဒါဏ်ထိပြီးပြီ၊ ဒါဖြင့်ရင်ဘာကြောင့်သီးလေးသီးပြည်တော်ပြန်တာကိုသတင်းဖေါ်ပြခွင့်ပြုခဲ့တာလဲ? ရှင်းရှင်းပြောရရင် အန္တရာယ်မရှိပါဘူးပြန်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်ဘဲနဲ့သွယ်ဝိုက်တဲ့ နည်း ကိုသုံးနေတာဘဲ၊ နောက်ပြီးဒီသတင်းကိစ္စကအစိုးရကိုအားပေးတာလေ၊ အစိုးရသဘောထားကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုကြေငြာချင်တာဘဲဖြစ်တယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သတင်းကတော့အတိုက်အခံကိုအားပေးတာဒါကြောင့်တတ်နိုင်ရင်
သူတွေကိုဖမ်းချင်ရင် ဖမ်းလို့ရတယ်၊ တရားဝင်ထုတ်ပြန်အာမခံမထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ ဒီကြားထဲပြည်တော်ပြန်တွေထဲကလူသိများတဲ့သူတွေကိုရှစ်လေးလုံးတုံးကပြည်တော်ပြန် တွေကိုကြေငြာသလိုသတင်းစာတွေထဲမှာစာလုံးမဲကြီးတွေသုံးပြီးဖေါ်ပြအုံးမှာပြေးကြည့်
စရာမလိုဘဲမြင်ရောင်နေမိတယ်။ အစိုးရရဲ့စေတနာကိုနားလည်လို့ပြန်လာပါတယ်၊ ဆိုတာတွေကြားရအုန်းမယ်။ ဖမ်းတဲ့လူတွေကိုလဲဆက်ဖမ်းနေအုံးမယ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလဲလွှတ်ပေးအုံးမှာမဟုတ်ဘူး။
လူတိုင်းနီးပါးကိုယ့်တိုင်းပြည်ပြန်ချင်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့အသုံးချခံမဖြစ်ဘို့နဲ့ထောင်ထဲရောက်မသွားမိဘို့လိုတယ်၊ ကိုယ့်ဘဝကိုရွေးကြတာဘဲလေစဉ်းစားပေါ့။ တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ အတူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ကိုကြယ်သီး၊ကိုပန်းသီးနဲ့ မင်းသမီးလေး မြစပယ်ငုံတို့ ကို အထူးဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကံကြမ္မာ တရုတ်ဘဏ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လက်ထဲမှာ
Sunday, 11 September 2011 12:21 နိုင်ငံတကာ ထင်ရှားကျော်ကြားပုဂ္ဂိုလ်များ
တရုတ်ဘဏ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး 'ဂျိုရှောက်ချွန်း' မှာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှု ရဖို့အတွက် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အရေးကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသည်။ တရုတ်စီးပွားရေး အင်အားကြီးလာမှုနဲ့အတူ ဂျိုရှောက်ချွန်း ရဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားမှုကလည်း အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဌထက်ပင် ပိုလာသည်။
မနှစ်က ဂျိုရှောက်ချွန်း က အမေရိကန်ဒေါ်လာ နေရာ အစားထိုးနိုင်မယ့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးသစ်တစ်ခု စတင်ဖို့ အဆိုပြုလိုက်တဲ့အတွက် ဈေးကွက်တွေမှာ ပွက်လောညံသွားပြီး၊ လူသိပိုများလာခဲ့သည်။ ဒီနှစ်မှာလည်း သူက ဂလိုဘယ်စီးပွားရေးကို အမေရိကန်က ဩဇာပေးမောင်းနှင်နေတဲ့ခေတ်၊ ကုန်သွားပြီလို့ ပြောရင်း ၀ါရှင်တန် အစိုးရကို ထပ်ဖိအားပေးလာသည်။
တရုတ်က ဂျပန်ကို ဖြတ်တက်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဒုတိယ စီးပွားရေး အင်အားကြီးနေရာကို ရယူလာနိုင်တာနဲ့အမျှ ဂျိုရှောက်ချွန်း ရဲ့ ပြောဆိုချက်တိုင်းကို ယခု ဈေးကွက်တွေက အာရုံစိုက်လာရသည်။ ဒီလို ဒုတိယ စီးပွားရေး အင်အားကြီးအဖြစ် သမိုင်းဝင်မှတ်တိုင်စိုက်နိုင်ဖို့ ကာလရှည် ချီတက်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် အနောက်က စက်မှုခေတ် အပါအ၀င် နှစ်နှစ်ရာကျော် ချီတက်ခဲ့ရမှုကို တရုတ်က ဆယ်စုနှစ် လေးခုကျော်နှင့် လျှောက်လှမ်း လာနိုင်ခဲ့သည်။
တစ်ဆက်ထဲမှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ စီးပွားရေး နံပါတ်တစ်နေရာ ရယူဖို့ တရုတ် ဘယ်လောက် အချိန်ယူမလဲဆိုတာ ဂျိုရှောက်ချွန်း ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ပြီး ဈေးကွက် စောင့်ကြည့်သူတွေက အကဲခတ်နေကြသည်။
ဂျို က ယွမ်ငွေတန်ဖိုးကို လျှော့ချမယ့်အစား၊ တန်ဖိုးထိန်းထားချင်သူ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ တရုတ် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ အရန်ငွေ ဒေါ်လာ ၂.၆၅ ထရီလီယံ အပေါ် ဖင်ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်သည်။
နော်ဝေးနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတဦး၏ မြူနီစပါယ် ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့ အကြုံ
ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် နော်ဝေးနိုင်ငံ၏ရွေးကောက်ပွဲ စံနစ်ကို တင်ပြပါမည်။
စတိုတင်ဂေး (stortinget) ဟုနော်ဝေးဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုသည့်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကို မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးမှ အချိုးကျ ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်သောကိုယ်စားလှယ် ၁၄၆ဦးနှင့်ဖွဲ့ စည်းပါသည်။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး၏သက်တမ်းသည် ၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မှ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှပျက်ပြယ်ကြောင်းကြေငြာခွင့်မရှိပေ။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်သည် ဥပဒေပြုခွင့် အာဏာကိုပါ ရရှိသည်။
နော်ဝေးနိုင်ငံသည်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်။နိုင်ငံတော်၏အာဏာကို ပါတီ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုတည်းက ရရှိခဲ့ ဘူးခြင်းမရှိပေ။
ထို့ ကြောင့်ပါတီများစုပေါင်း၍ အနည်းစု ကက်ဘိနက် (သို့ မဟုတ် )ညွန့်ပေါင်းအစိုး၇ကို ဖွဲ့စည်းကြရသည်။
နော်ဝေးနိုင်ငံသည်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်မြူနီစပါယ်ရွေးကောက်ပွဲ ဟူ၍ရွေးကောက်ပွဲ ၂မျိုးကျင်းပသည်။
ရွေးကောက်ခံရသောကိုယ်စားလှယ်များ၏သက်တမ်းသည် ၄နှစ်ဖြစ်သည်။ရွေးးကောက်ပွဲ၂ခု ကို ၂နှစ်ခြား၍ကျင်းပသည်။`
ဥပမာအားဖြင့်ယခုကျွန်တော်တို့ မဲပေးခဲ့ သည့် မြူနီစပါယ်ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၅ တွင် ထပ်မံကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး
၊ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၁၃ တွင် တစ်ကြိမ် ၊၂၀၁၇ တွင် တစ်ကြိမ် ကျရောက်လေိမ့် မည်ဖြစ်သည်။
စကြာဝဠာတခုလုံးတွင်ရှိသော နော်ဝေးနိုင်ငံသားတိုင်းမဲပေးခွင့်ရှိသည်။( အဓိပါယ်မှာ အာကာသယာဉ်မှုးများ၊နောင် တစ်ချိန် ကမ္ဘာမြေကဲ့သို့ သောနေရာသစ်တစ်တွင် ရောက်ရှိနေနိုင်သော နော်ဝေးနိုင်ငံသားများကို ညွှန်းဆိုဟန်ရှိပါသည်။ (စကားချပ်)
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နှစ်အတွင်း အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်မည့်သူများမှစ၍မဲပေးခွင့် ရှိသည်။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင် နော်ဝေးနိုင်ငံသားများနှင့် နော်ဝေးနိုင်ငံသားအဖြစ် တရားဝင်ခံသူထားတော အခြားနိုင်ှုံသားများသာမဲပေးခွင့် ရှိသည်။
မြူနီစပါယ် ရွေးကောက်ပွဲများတွင်နော်ဝေးနိုင်ငံအတွင်း ၃နှစ်ထက်မနည်း အဆက်မပြတ်နေထိုင် သည့် နိုင်ငံခြားသားများလည်းမဲပေးခွင့် ရှိသည်။
၁၉၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ အမျိုးသမီးများမဲပေးခွင့်ရခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ၂ခု စလုံးတွင် နော်ဝေးဘုရင် ကြီးကို နိုင်ငံသား အဖြစ်ထည့်သွင်းမစဉ်းစားသောကြောင့် မဲပေးခွင့်မရှိပေ။
မိဖုရာကြီးနှင့်အိမ်ရှေ့ မင်းသားကို ဥပဒေအရတားမြစ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းမဲပေးလေ့မရှိကြပေ။
(ဘာကြောင့် ဆိုသည်ကို ဘရိန်းစတောင်းမင်းလုပ်ကြည့်သင့် ကြပါသည်။စာေ၇းသူ)
ကြိုတင်မဲ နှင့် မဲရုံမဲ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည် နာမကျန်းဖြစ်နေလျင်ဖြစ်စေ
၎င်း ၏ သန်းခေါင်စာရင်းရှိရာ မြို့ နယ်မှဝေးရာသို့ ရောက်နေလျင်ဖြစ်စေ
ကြိုတင်ဆန္ဒမဲကို တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့်မဲပေးရက်သို့ ရောက်မည့်တစ်ရက်အလိုထိပေးနိုင်ပါသည်။
ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သော တနင်္ဂနွေ နှင့်တနင်္လာ ၂ရက်တွင် မိမိ သန်းခေါင်စာရင်းရှိရာ မြို့ နယ်မှ သတ်မှတ်ပေးထားသည့်
တနင်္ဂနွေ နေ့ တွင် မဲရုံကို ညနေ ၂ နာရီမှ ည၆ နာရီအထိ၎င်း၊
တနင်္လာနေ့ တွင် နဲနက် ၉နာရီမှည၉နာရီအထိ ၎င်း မဲပေးနိုင်သည်။
မဲပေးရန်အတွက် မဲဆန္ဒရှင်၏ထင်ရှားသောဓါတ်ပုံပါဝင်သည့်ဘဏ်ကဒ် ၊ ကားလိုင်စင် ၊ပတ်စပို့ (လူတိုင်းလက်ထဲတွင် ပတ်စပို့ရှိသည်။
နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးသို့နော်ဝေးပတ်စပို့ ကိုင်ဆောင်ထားသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကြိုတင် ဗီဇာမလိုဘဲ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ စာရေးသူ)
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ၁လ အလိုခန့် တွင် မိမိ သန်းခေါင်စာရင်း ရှိ၇ာမြို့ နယ်မှလက်ရှိနေထိုင်ရာလီပ်စာသို့ မဲပေးခွင့်ကဒ်ပြားကိုပို့ ပေးပါသည်။
့လူမှုဖူလုံရေးစံနစ်အကြောင်းကို သီးခြားတင်ပြပါအုံးမည် ။အလွန်မင်္ဂလာရှိပါသည်။စာရေးသူ)
အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်တွေ့ဆုံသည့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ဝင်ကို မေးမြန်းချက်
Published on September 12, 2011 by ​အေး​နိုင်
မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ် (Derek Mitchell) နဲ့အဖွဲ့ဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများကွန်ရက်က ဦးမောင်မောင်လေး၊ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်း၊ အဆိုတော်ဇေယျာသော်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမြတ်သူတို့ကို ဒီနေ့ တွေ့ဆုံပါတယ်။
အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်
ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာ ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်က မြန်မာပြည်တွင်း လက်ရှိ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ် အမြင်တွေကို မေးမြန်းပါတယ်။
တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်သူများကွန်ရက် ပြောခွင့်ရသူ ဦးမောင်မောင်လေးကို မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကိုမောင်မောင်လေးကို အဓိက လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေများ မေးမြန်းသွားပါလဲ။
“မြန်မာပြည်က လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူသိချင် တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲ့တော့ အခုလက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ လယ်ယာမြေသိမ်းခံရမှုတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအတွက် ဥပေဒအရ ကာကွယ်ပေးမှု မရှိတာတွေ၊ ကလေးစစ်သား စုဆောင်းနေမှုကိစ္စတွေ၊ မိမိရဲ့လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့သူတွေ ခုထိ ပြန်မလွတ်သေးတာတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားနေတာတွေ ပြောတယ်။
“အခြေခံဥပဒေသည်ပင် လူ့အခွင့်အရေးတွေအပေါ် အခြေခံပေါ်ပေါက်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာလည်း ဒီဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အလားအလာ မရှိသေးဘူး ဆိုတာလည်း တွေ့ရတယ်၊ ဒါတွေ ပြောပြခဲ့တယ်။”
ဒီလ ၈ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူစိတ်ဝင်စားမှုရှိလား၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေပြောကြားပါသေးလဲ။
“လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ပေါ်လာတာကို သူ့အနေနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဒီကော်မရှင်က ဘာတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်း စောင့်ကြည့်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်ဗျ။”
ကိုမောင်မောင်လေးတို့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကွန်ရက်ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်ထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားမှု ရရှိရဲ့လား။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်ပြခဲ့သေးလား။
“သူကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းတယ်ဗျ။ ဒါလောက် ကျပ်တည်းနေတဲ့ ကြားထဲက လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်တာ သူအံ့ဩမိတယ်တဲ့။ ကျနော်တို့ ကလည်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သူ့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အကျပ်အတည်းကြားကပဲ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရတဲ့အကြောင်း၊ ဘယ်နေရာသွားသွား စောင့်ကြည့်ခံရမှုတွေရှိတယ်၊ နောက်ကလိုက်လာတာတို့ ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တာ ခံရတဲ့အကြောင်းတွေရောပေါ့ဗျာ။”
ဦးသိန်းစိန်သမ္မတ အစိုးရ လက်ထက်မှာ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကရော ဘယ်လိုမျိုး တင်ပြလိုက်လဲ။
“ဟိုဘက်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ ဒီဘက်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သီးသီးခြားခြား ကောင်းမွန်လာတာကတော့ မရှိသေးဘူး အရင်အတိုင်းပဲ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျနော်ပြောပြပါတယ်။”
သူက ဘာအကြံဉာဏ်တွေ ပေးသလဲ။ ဘယ်လိုမျိုး ကူညီမှုတွေ ကမ်းလှမ်းသလဲ။
“အကြံဉာဏ်ပေးမှု၊ ကူညီမှုဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ သူကိုယ်တိုင်က လာရတဲ့ အနေအထားက မူဝါဒရေးနဲ့ ညှိနှိုင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်၊ သူ့ခရီးစဉ်က ပထမအကြိမ် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ သူပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်ပေါ့။ ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားကိစ္စတွေအပေါ်မှာ အဖြေရှာရမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င်ပေါ့။ ဒါတွေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေတရပ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ၊ လုံးဝအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတခု ဖြစ်လာမှ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုလို ကိစ္စမျိုးတွေ၊ သူတို့ဘက်က မူဝါဒ ပြောင်းလဲမယ့်ပုံစံမျိုးကို သူပြောပြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။”
ဒီခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုမောင်မောင်လေး ဘယ်လိုမြင်လဲ။
“ကျနော်တို့ မြင်တာက ဒီလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုက ကောင်းပါတယ်ဗျ။ သူတို့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဘက်ကနေပြီးတော့ တဘက်ကလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ ပြည်တွင်းမှာ မမျှမတဖြစ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေ ပြုပြင်နိုင်အောင် သူတို့ဘက်ကလည်း တစုံတရာ ဖိအားပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတရပ်ကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး တရပ်လောက်တော့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
အရေးတကြီး ဘာတွေပြောချင်တာ ရှိသေးလဲ။
“ကျနော်က ပြောပြပါတယ်။ အစိုးရကရော၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကရော၊ တခြား နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကရော လက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ တူတာတွေ တွဲလုပ်၊ မတူတာတွေ ချန်ထား ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီကိစ္စက အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်လို့။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ တူတာတွေ တွဲလုပ်တာကို ကြိုဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကိစ္စအရပ်ရပ်က မတူတာတွေကို ချန်ခဲ့လို့ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါလို့။ အဲဒီတော့ မတူတာတွေကို ညှိနှိုင်းဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်လို့။ ဒါမှသာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကိစ္စ အရပ်ရပ်က ပြေလည်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးပါတယ်။”
တကယ်တော့ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုအကြား ဆက်ဆံရေး အ ခြေအနေတွေပေါ်မှာ အထက်ကအမိန့်ပေး သူ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဆင်ခြင်တုံ တရားနဲ့ တာဝန်ယူမှုအခန်းကဏ္ဍတွေက အထိုက်အလျောက်လွှမ်းမိုး နေ တတ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာအထက်အောက်အမိန့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင် ရွက်ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့် ကျနော် ဒီလိုဆို လိုက်ရတာပါ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေး တွေကိုပဲ ဥပမာပြုပြောဆို ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပမ္မ၀တီရေတပ်စခန်း ဌာန ချုပ်မှာ တပ်တွင်းမိသားစုသက်သာချောင်ရေး အစုစပ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု ဖြစ်တဲ့ PGE (Pammawaddy General Enterprise) ထူထောင်လုပ်ကိုင်တဲ့ အခါ ဟိုင်းကြီးကျွန်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျေးရွာတွေက ဆားလုပ်ငန်း တောင်သူတွေဆီမှာ ဆားကြိုတင်ဝယ်ယူတဲ့ လုပ်ငန်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဆားမပေါ်မီ ရာသီမှာ ငွေကြိုပေးဝယ်ယူထားတာဖြစ်ပြီး ဆားထွက်တဲ့အချိန် ရောက်မှ ဆားကွင်းတွေထဲမှာ လိုက်ပြီး စုဆောင်းယူရတာပါ။
PGE မှာတာဝန်ပေးထားတဲ့ ကျနော့သူငယ်ချင်း တပ်ကြပ်ကြီးတဦးကို ဆား သိမ်းဖို့ လွှတ်လိုက်လို့ ဆားဖိုရွာကို သူသွားရ ပါတယ်။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ရယက ဥက္ကဋ္ဌကနေတဆင့် ဆားတောင်သူတွေကို အကြောင်းကြားခေါ်ယူပြီး တွေ့ဆုံဖို့ပါ။ အဲဒီ အချိန်မှာ ဥက္ကဋ္ဌကလည်း တခြား ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေများနေလို့ သူ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းပြပြီး နောက်မှလာဖို့ ရက်ချိန်းပေးလိုက်တော့ ကျနော့ သူငယ်ချင်း တပ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့တာပေါ့။
တပ်ကိုရောက်တဲ့အခါ သူ့အထက်မှာတာဝန်ယူရတ ဗိုလ်ကြီးကို အခြေအနေပြန်ရှင်းပြတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေဘူးပေါက် တာမလိုချင်တ ဗိုလ်ကြီးက ရှင်းပြချက်ကိုလက်မခံဘူး။ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဆူပူကြိမ်းမောင်းတယ်။ “မင်းတို့ကိုခိုင်းလိုက် ရင် ဘယ်တော့မှ အဖြစ်မရှိဘူး။ ကွန်ပလိန်းပဲ တက်လာတယ်။ ဟေ့ကောင် မင်းမှတ်ထား… စစ်သားဆိုတာ အမိန့်ပေး ရင် ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်။ မင်းလို တပ်ကြပ်ကြီးတဦးက ရယက ဥက္ကဋ္ဌလောက်ကို ပါးရိုက်ပြီး ခိုင်းလို့ရတယ်သိလား… တဲ့။ သူ့စကားက တောင်းဆိုချက်ပါသလို မြှောက်ပေးတဲ့သဘောလည်း သက်ရောက်နေတယ်။ အဲဒီလို အရာရှိမျိုးဟာ စစ်သည်ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ အကာအကွယ်ပေးရိုး ထုံးစံမရှိပါ။
နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ စုပုံရိက္ခာသယ်တဲ့အချိန်မှာ ကြုံရတာ။ ဌာနချုပ်တခုလုံးအတွက် ၃ လစာစုပုံရိက္ခာကို မင်္ဂလာ ဒုံ တောက်ပံ့ရေးတပ်ကထုတ်လာပြီး ဟိုင်းကြီးဆိပ်ကမ်းကနေ ပစ္စည်းထိန်းတပ်ဂိုဒေါင်ကို စစ်သည် အင်အားနဲ့ သယ်ရ ပါတယ်။ တပ်ပိုင်ကားတွေအပြင် ရွာထဲက ခရီးသည်တင်ကားတွေကိုလည်း ငှားသယ်ရပါတယ်။ စစ်သည်တွေ ရွာထဲက ကားနဲ့ ရိက္ခာဂိုဒေါင်ကကမ်းနားကို အသွားလမ်းမှာ ရွာသားနှစ်ဦး စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လမ်းမှာဆုံမိတယ်။ ကားလမ်းက
ကျောက်ကြမ်းခင်းလမ်းဖြစ်တဲ့အပြင် ကျဉ်းလည်းကျဉ်းတော့ ဆိုင်ကယ်က ရှောင်တဲ့နေရာမှာ ပွတ်သီကပ်သီလွတ်ရုံလေး ဖြစ်နေတယ်။ ကားလည်းကျော်သွားရော ဆိုင်ကယ်နောက်မှာ ထိုင်လိုက်လာတဲ့သူက လွတ်အောင်မမောင်းရကောင်း လားလို့ လေးဂွနဲ့ ပစ်ပါလေရော။ ကံမကောင်းတော့ ကားနောက်မှာ မတ်တပ်ခိုစီးလာတဲ့ စစ်သည်ရဲ့ ကျောပြင်ကိုမှန် တော့တယ်။ ဒါနဲ့ တပ်မှူးကိုသတင်းပို့ပြီး အဲဒီရွာသားကိုခေါ်ပြီးမေးတဲ့အခါ အဲဒီလူက အရက်မူးနေပြီး မချေမငံပြောလာ တယ်။ သူက ကားဘီးကိုပစ်တာပါတဲ့။ စစ်သည်တွေ ဘယ်ကျေနပ်ပါ့မလဲ။ တပ်မှူးရှေ့မှာပဲ အဲဒီလူကို ပြောဆို ကြိမ်း မောင်း ကြတယ်။ အဲဒီမှာ တပ်မှူးက သူ့အမိန့်မရဘဲ ဘယ်သူမှ ၀င်မပြောဖို့ထိန်းလိုက်တယ်။ တပ်ကိုပြန် ရောက်မှ ရဲ ဘော်တွေကို ပြေလည်အောင်ရှင်းပြတော့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာလည်း မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
တနေ့မှာတော့ တပ်ထဲကစစ်သည်တွေနဲ့ ဟိုင်းကြီးရဲစခန်းက ရဲတပ်သားတွေ ရွာထဲမှာရန်ဖြစ်ကြပါရော။ ဖြစ်တဲ့နေရာက ရဲစခန်းနဲ့နီးတော့ စစ်သည်တွေက တပ်ကိုပြန်လာပြီး တပ်ရင်းကင်းက သေနတ်ကိုယူဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ကင်းမှူး၊ တာဝန် မှူး၊ တာဝန်ကျအရာရှိ အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့ကြရင်း ဌာနချုပ်မှူးဆီကို တခဏချင်း သတင်းပေါက်သွားတော့ ဌာနချုပ်မှူး က A2 ဗိုလ်မှူးကို ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ ရဲစခန်းကိုလွှတ်တယ်။ A2 ဖောကား ကြီးနဲ့ ရဲစခန်းကိုအသွားမှာ ရဲဘော်တွေက စိတ်မချဘူးလို့ အကြောင်းပြပြီး ကားပေါ်ကိုအတင်းတက်လိုက်ကြ ပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် A2 က ဘယ်သူ့ကိုမှ ကားပေါ် တက်ခွင့်မပေးပဲ သူတစ်ယောက်တည်းပဲ ရဲစခန်းကိုသွားပြီး စခန်းမှူးန တွေ့ဆုံဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အခါ ပြဿနာပြေလည် သွားပါတယ်။
ဒေါသထွက်တယ်၊ပေါက်ကွဲတယ်၊ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူ့သဘာဝပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတွေ ပိုပြီးဖြစ် လေ့ရှိတဲ့ ကိစ္စ။ အရပ်ထဲမှာရန်ပွဲရှိသလ တပ်ထဲမှာလည်းရှိတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တပ်ဆိုတာအဖွဲ့အစည်း၊ ထက် အောက်အမိန့်စီး ဆင်းမှုရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမှုပုံစံနဲ့ တာဝန်ရှိသူ တွေရဲ့တာဝန်ယူတတ်မှုတွေက အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ခံစားမိရာ ဘက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းတဲ့အခါ ပြဿနာအတိုင်းအဆ မရှိအောင် ကြီးထွားသွားတတ်ပါတယ်။
ပဲခူးမြို့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ လူငယ်နှစ်ယောက်ပစ်သတ်ခံရမှုမှာ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပေါ့လျော့မှုနဲ့ စိတ်ခံစားမှုဦးစား ပေးတဲ့သ ဘောကို အထင်အရှား တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်သာ ထိန်းသိမ်းတတ်ရင် ရှောင်တခင်ရိုက်ပွဲ လောက်နဲ့ပဲ ပြဿနာ အဆုံးသတ်ခဲ့မှာပါ။ ပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲအရေးယူမှုကလည်း ပြည်သူလူထု ကျေနပ်လောက်အောင် ရိုးသားပွင့်လင်း မှုမရှိတော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ တဦးချင်းဖြစ်ပွားတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ ခံရသူရဲ့ နစ်နာမှုသိအောင် လေ့လာနိုင်ဖို့နဲ့ ကျေနပ်မှုရှိအောင် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာပါ။ ကျူးလွန်သူကို ထိုက်သင့်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေမှုနဲ့ အပြစ်ပေး အရေးယူရမှာဖြစ်ပြီး အလားတူဖြစ်စဉ်တွေ ထပ်မဖြစ်ဖို့ ကျန်တဲ့သူတွေကိုပါ အသိပညာပေးတားမြစ်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
အရေးကြီးတာက တဦးချင်းပြဿနာကိုအခြေခံပြီး လူများစုရင်ထဲမှာ နာကျည်းမှုခံစားချက် ကူးစက်မသွားစေဖို့ပါ။ စည်း ကမ်းတင်းကျပ်မှုအားနည်းသော အဖွဲ့အစည်းများမှာထက် တပ်မတော်ကဲ့သို့သော အထက်အောက် အမိန့်တိကျစွာလိုက် နာဆောင်ရွက်ရသော အဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာ ပြဿနာပိုဆိုးမသွားအောင် ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူအဆင် ပြေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အမိန့်ကိုထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ တချက်လွှတ်အမိန့်သုံးတယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်သူကမှ စောဒကတက် အငြင်းပွား လိမ့်မယ်မထင်ပါ။ အမိန့်နဲ့ တာဝန်ယူမှုကို သင့်တော်သလို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာများကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ကျင့်သုံးခွင့်အာဏာဆိုတာက အုပ်ချုပ်စီမံပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေတာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုအကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုဆိုးမှု အကျိုးဆက်တွေဟာ အုပ်ချုပ်သူအဆင့်ဆင့်ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တတ်မှု အပေါ်မှာမူတည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား သောအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁
မနေ့က နေပြည်တော် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ လုပ်သွားတဲ့ ၀န်ကြီး ၅ ယောက်နဲ့ မီဒီယာများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ အ မှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဲ့ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း “နောက်မဆုတ်ဘူး၊ဆက်လုပ်မယ်” ဆိုတဲ့ ချဲလင့် စကားလုံးတွေကို ဖတ်ရပြီး အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်၊ ဒေါသတွေ တချောင်းချောင်း ထွက်လာတော့ ရှေ့မီ နောက်မီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်က “စိတ်လျော့ပါ၊နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဒေါသမထွက်ရဘူး၊ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့် တတ်ရမယ်”လို့ ကျနော့်ကို နားချရှာပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ “ကျနော် နိုင်ငံရေးသမား မဖြစ်ချင်ဘူး၊ ဖိုက်တာပဲ ဖြစ်ချင်တယ်” လို့ လေသံမာမာနဲ့ ဆရာသမားကို ဘုတော ပိတ်လွှတ်လိုက်တယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျနော့်ထက်ပိုပြီးတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူ မရှိ တော့ဘူး” ဆိုတဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးရဲ့စကားဟာ ငါသိ၊ ငါတတ်၊ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မဟနဲ့၊ အားလုံး ရှပ်အောက့်၊ မြစ်ဆုံနဲ့ ပက်သက်လို့ အမြီးကုတ် နားရွက်မထောင်ကြနဲ့ဆိုပြီး သန်းခြောက်ဆယ်သော မြန်မာပြည်သူတွေကို စိန်ခေါ်လိုက်တယ် လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ ပြည်သူအကုန်လုံးဆိုတော့ သမ္မတကြီး အပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုအစိုးရတဖွဲ့လုံးလည်း ပါပါ တယ်။
မြစ်ဆုံနဲ့ပက်သက်ပြီး ၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းစကားကို ခဏငှားသုံးရရင် မြစ်ဆုံရောဂါဆန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး အချက်အလက် ဒေတာ၊ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ် စတာတွေကို အစိုးရသတင်းစာထဲက ဆောင်းပါး သုံးလေးပုဒ်၊ အွန်လိုင်း သတင်းမီဒီယာ တွေမှာ တင်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက ပညာရှင်တွေ၊ မျိုးချစ် ပြည်ချစ် အနုပညာရှင်တွေရဲ့ သုံးသပ် ရေးသားပြောဆိုခဲ့သမျှကို ကျနော် နာယူမှတ်သားခဲ့တာ ခေါင်းတခုလုံးနဲ့ မဆန့်တော့ပါဘူး။ အဲဒီထဲက တချို့ဆို ၀န်ကြီးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဒီဘိတ်ပုံစံမျိုး စကားစစ်ထိုးနိုင်လောက်တဲ့ အဆင့်ရှိကြတယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ အပြန်အလှန် ဟစ် ကြွေးနိုင်တဲ့ စင်မြင့်တခုကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင် လက်ခမောင်း ထခတ်ကြမယ့်သူတွေ တန်းစီထွက် လာပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်ဟာ ဘူမိဗေဒနဲ့ ကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ “မြစ်ဆုံနဲ့ငလျင်အန္တရာယ်” အပိုင်း လောက်ကိုပဲ တွက် ဆတတ်ပေမယ့် မြစ်ဆုံကိစ္စဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတင် မဟုတ်သလို နိုင်ငံရေး မပြေလည်မှု အဆင့်အတန်း မှာတင် ရှုမြင်လို့ မရပါဘူး။ မဟာအမျိုးသားရေးကြီးပါ။ ဘုရားကျောင်းကန်တွေမှာ ဘိနပ်မစီးရ ဆိုသလိုပေါ့။ မြန်မာ တ မျိုးသားလုံးရဲ့ အထွတ်အမြတ်ကိစ္စဆိုတော့ မှောင်နဲ့မည်းမည်းထဲမှာပဲ နေချင်နေပါရစေ၊ အဲဒီ လုပ်လက်စနေရာမှာ ဆက်မလုပ်ဘဲ ရပ်ပစ်ပါ၊ နေရာရွှေ့ လုပ်ပါလို့ ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းကို စေခိုင်းရမှာပဲ။ မေတ္တာမရပ်တော့ဘဲ၊ ငြင်ငြင်သာသာ မပြောတော့ဘဲ “ရောင်းသူဝယ်သူ အသံတူ” လုပ်ပစ်ရတော့မှာပဲ။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီး ဦးနေ၀င်း ရဲ့ပါတီညီလာခံ နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းကို ပြေးပြီး သတိရဖြစ် တဲ့အထိ ၀န်ကြီးဦးဇော်မင်း ရဲ့ စကားလုံးတွေက ရင့်သီးလွန်းလှတယ်လို့ ကျနော် ခံစားမိတယ်။ ဦးနေ၀င်းက “မိုးပေါ် ထောင်မပစ်ဘူး၊ တည့်တည့်ပစ်တယ်” လို့ ထွက်ခတ်ခတ်သွားပြီး တိုင်းပြည်မှာ ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ၀န် ကြီးလည်း ကြားဖူးမှာပါ။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာ နိုင်ငံရေးပို့စ်နေရာမှာ ရှိနေတည်နေတဲ့အတွက် မီဒီယာကတဆင့် ပြည်သူတွေကို မက်ဆေ့ရ်ှပေးတဲ့အခါ စည်းရုံးဖျောင်းဖျရေး ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ လုပ်ရကိုင်ရပါတယ်။ အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်များလို ငါတကော ကော၊ ဒေါသသံနဲ့ လူထုကို မက်ဆေ့ရှ် ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့လျှောက် မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ ဆိုးရွားမှုတွေ အုံ နဲ့ကျင်းနဲ့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျနော် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲ မပေးခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးကို ကြက်ခြေခတ်၊ ပယ်မဲ ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီး ဒီနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို No လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ကျနော့်ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀န်းနဲ့ တချို့ မိတ်ဆွေများရဲ့ လက်ရှိအစိုးရ အပေါ်သဘောထားတွေကို နားစိုက်မိတဲ့အခါ နည်းနည်းလက်ခံလာတဲ့ပုံကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော် မကြိုက်ပေမယ့် ကြိုက်တဲ့သူတချို့ တိုရည်ရှားရည် ရှိလာတာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ လူထုဆီ လှမ်းလာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကြောင့်လို့ သူတို့ က ပြောကြတယ်။ မြစ်ဆုံအရေး၊ စစ်ပွဲရပ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးမှာတော့ သူတို့လည်း ကျနော် နဲ့ တသဘောထဲဖြစ်နေတာ တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးရဲ့မာရည်ကြောရည် တုန့်ပြန်သံကြောင့် ကိုင်းညွှတ်လာစ သူတို့စိတ်တွေ နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဦးဇော်မင်းကြောင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ လှတပတဖြစ်လာ လေးတွေ သဲထဲရေသွန်ဘ၀ရောက်ပြီး ဒုံရင်းပြန်ဆိုက်မယ့်ကိန်းပါဘဲ။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးရဲ့ နိဒါန်းဟာ စက်သုံးဆီဈေး မြှင့်တင်လိုက်တာက စခဲ့တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အခု ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့သူတွေဟာ မဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်အရာမှာ စံနမူနာပြုထိုက်တဲ့ သူရဲကောင်းတွေပါ။ သူတို့စိတ် ဓာတ်တွေရဲ့ တစိတ်တပိုင်းလောက်ကို ရင်ထဲထည့်ပြီး မြစ်ဆုံကိစ္စကို ကျနော်တို့ဆက်လုပ်သွား ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ကျနော် တို့အားလုံးရဲ့ ပခုံးပေါ်ကို အမျိုးသားရေးတာဝန်ကြီးတခု ရောက်လာပြီလို့ ခံယူဖို့ အချိန်ကျပါပြီ။ “၀န်ကြီးက ဆက်လုပ် မယ်၊ ကျနော်တို့က ဆက်မလုပ်နဲ့” ဆိုတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ရှားမှု နှစ်ခုဟာ ထိပ်တိုက်တိုးနေပါပြီ။ “ညွှန်ချုပ်.. မင်းရေး တယ် ပြောလိုက်၊ ငါရေးတယ် မပြောနဲ့” လို့ ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ်ဝန်မခံရဲတဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးရဲ့စိတ်ထားကို ကျနော်တို့က ဘယ်လိုယုံရမှာလဲ။
၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို လူထုစိန်ဝင်း၊ ဂျူး၊ မောင်ဝံသ၊ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၊ ဒေါက်တာမြင့်မြင့် ခင်၊ ဦးအောင်လှထွန်း၊ ဒေါက်တာအေးမောင်၊ ဒေါက်တာသိန်းမြင့်နဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့ ချက်ချင်းတုန့်ပြန်လိုက် သံတွေကလည်း သိသိသာသာ ရေချိန်မြင့်လာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်ပေါက်ကွဲလာနိုင်ပါ တယ်။ မြစ်ဆုံနဲ့ပက်သက်တဲ့ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေတာတွေဟာ ဟောပြောပွဲတွေ၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေ၊ စကားဝိုင်း တွေကတဆင့် လမ်းမတွေပေါ်အထိ လျှံကျစီးဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ မောင်စိန်ဝင်း၊ ဦးထွန်းလွင်၊ ကိုတာ၊ ကိုမြင့်ဇော်တို့ရဲ့ မြစ်ဆုံအရေး မှတ်ချက်တွေကလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိ ဖြစ်လာပါပြီ။
တေးရေးမြင့်မိုးအောင် အင်တာဗျူးတခုမှာ ပြောသလိုပေါ့။ “အချက်အလက်တွေ မသိပါဘူး၊ မကြိုက်တာဟာ ရင်ဘတ် ထဲက လာတာမို့ မကြိုက်တာဘဲပေါ့ဗျာ” ဆိုတာလေးကို ကိုင်ပြီးပြောရရင် ကျနော်မကြိုက်တာ ဆိုတာလည်း ရာဇ၀င်အ ရ၊ သမိုင်းကြောင်းအရ မကောင်းခဲ့တာ၊ စုတ်ပြတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာ၊ လိမ်ညာဖြီးဖြန်းခဲ့ကြတာ၊ ပြည်သူလူထုကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိ ရှိတယ်လို့တောင် မထင်ခဲ့တာ၊ ငါဘုရင် ဘယ်နှစ်ပတ်လှည့်လှည့် ကြည့်ကောင်းကွနဲ့ ထင်ရာစိုင်းခဲ့တာ၊ အာဏာနဲ့ မြန်မာကို အပေးအယူလုပ်ခဲ့တာ တုတ်ထမ်းပြီး ပြောတောင် မကုန်နိုင်ပါဘူး။
ဘယ်လောက်ချေးချွတ်သန့် စင်ရေးတွေ ပြဲနေအောင်လုပ်လုပ် အတိတ်က ဒဏ်တွေကိုတော့ ထိုက်သင့် သလောက်ခံ နေရဦးမယ့်အနေအထားမှာ “မြစ်ဆုံအရေး” ကို တာဝန်အရှိဆုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ ကို၊ ဖုံးဖိထားသမျှတွေကို ကန်လန့်ကာကြီးဆွဲလှန်ပြလိုက်သလို လက်ကုန်မထုတ်ပြဘဲ ဒီရေကာတာကြီးပဲ ပြီးအောင် ဆက်မဆောက်ရရင် မြန်မာပြည်ကြီး ဖုန်တွေသဲတွေ လူးသွားရမလောက် အကြောက်အကန်ဖြစ်နေတာ ရုပ်ဆိုးလှပါ တယ်။ နောက်ကွယ်မှာ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ တစုံတခုများ ရှိနေမလားဆိုပြီး ကောက်ချက်ချရတော့မှာပဲ။ အားလုံးလည်း ဒီလိုပဲ မြင်မိကြမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကမြန်မာကြံ့ဖွံ့အစုိုးရက လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တရပ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအာမခံချက်တွေ ရှိကြောင်းပြသနိုင်ဖို့၊ မြန်မာပြည်အထွေထွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အကောင်းဖက်ကိုဦးတည်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ လက်ရှိအာဏာပိုင်တွေက အစီအစဉ်တွေဖော်ဆောင်လာနေတဲ့အပေါ်မှာ အတုိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သဘောထားကိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
- အခုသူတို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အပေါ်မှာ ဆရာ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်သလဲ။
- အခု လက်ရှိအစုိုးရကလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့လိုက်တယ်။ ဒါကို ထူးခြားတယ်လို့ တချို့လူတွေကထင်မြင်ပြီးတော့ ကျနော့်ဆီကို ဖုံးဆက်ပြီးတော့ သတင်းဖတ်ပါ၊ နားထောင်ပါစသည်ဖြင့်တောင် တိုက်တွန်းကြတယ်။ တကယ်တမ်း နားထောင်လိုက်တော့၊ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ဖွဲ့လိုက်တာက ဘာမှ ထူးခြားတာ မတွေ့ရဘူး။ သူတို့ရဲ့သံအမတ်ဟောင်းတွေ၊ ဥပဒေပညာရှင်တချို့နဲ့ အစုိုးရ၀န်ထမ်း အရာရှိကြီးတွေ ဘာတွေပဲဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ရဲ့ နောက်ကြောင်း ရာဇ၀င်တွေ၊ ပရိုဖိုင်းတွေလည်း ဘာမှမသိရသေးဘူးလေ။ သူတို့တွေ ဘယ်လိုရပ်တည်ခဲ့သူတွေလဲ၊ ဘယ်လုိုလူစားတွေလည်းဆိုတာမသိကြရသေးဘူးလေ။
- အယင်တုန်းကစစ်အုပ်စုက အာဏာကို တိုက်ရိုက်ကိုင်စွဲထားတုန်းက သူတို့ကောင်းကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာကို လှည်ြ့ပီး ပြောဖို့ ခိုင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေ ရှိဖူးတယ်လေဆရာ။မြန်မာပညာရှင်တွေ၊ ဗြူရိုကရက်တွေကို စစ်တပ်က ခိုင်းဖူးသေးတယ်လေ။ အဲသည်လိုမျိူးသည်လိုအဖွဲ့ကို လက်ရှိအစုိုးရအသစ်က ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့တယ်လို့လဲ တချိူ့ကထင်မြင်ချက်ပေးကြတယ် ဆရာ။
- ကျနော်ထောင်ထဲမှာ ကျနေစဉ်တုန်းကကြားခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့လိုအဖွဲ့မျိူးတွေကို ကမ္ဘာလှည့်နေတဲ့မြန်မာလူပျက်ကြီးများလို့တောင် ဝေဖန်ကြတယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်။အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ နောက်ကြောင်းနဲ့ သဘောထားတွေက ပေါ်လာမှာပေါ့လေ။ အခု မသိရသေးပေမယ့် နောက်တော့သိလာကြမှာပါ။ သူတို့ လုပ်ရပ်တွေကိုလည်း ကြည့်ရင်း ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဆရာအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ လူအမျိူးအစားတွေပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိူးမြင်သလဲ၊ လက်ရှိတွေ့ရသလောက်ပေါ့လေ။
- ကျနော့်အမြင်ကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှာ ၀န်ထမ်းတွေ၊ သံအမတ်ဟောင်းတွေထက် ဥပဒေပညာရှင်တွေများများ ပိုပြီး လိုအပ်တယ် ထင်တယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းမှာကော၊ ပြည်ပကကော မေးမြန်းစုံစမ်းတဲ့ဆီမှာ၊တွေ့ဆုံရှင်းလင်းရတဲ့ဆီမှာ သူတို့က ရင်ဆိုင် ပြောဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။အဲသည်လိုမျိူး အတွေ့အကြုံတွေကို ပြနိုင်ရမယ် ထင်တယ်။
- လက်ရှိအစုိုးရကသူတို့ခန့်လိုက်တဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ လူတွေတိုင်းမှာ သူတို့စိတ်တိုင်းကျခန့်အပ်တာတွေချည်း ဖြစ်နေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီး တဖက်သတ်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံတကာက ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်တွေ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေ၊ အစုိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းယခင်စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ဝေခံအဆင့်ဆင့်တွေက နေရာယူထားတယ်လို့ပဲ အများကပြောဆိုနေကြတယ်။ အဲသည်လို လူတွေ အဆင့်ဆင့် ခန့်အပ်ထားတာတွေချည်းဖြစ်နေတာကိုဆရာက ဘယ်လိုပြောချင်ပါသလဲ။
- အခုလက်ရှိလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က အပေါ်ဆုံးအလွှာမှာ ဖွဲ့ထားပြီး ပြထားရုံ သက်သက်ပဲလား၊အောက်ခြေ အဆင့်ဆင့်မှာ ကော်မရှင်ခွဲတွေ ခန့်အပ်ပြီး လည်ပတ်မှာလား။ အပေါ်မှာပဲအစုတစုလောက်ဖွဲ့ထားပြီး ပေးစာတွေ၊ ပစ်စာတွေ တုိုင်ကြားလာမှပဲအရေးယူဆောင်ရွက်ဖ်ို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆင့်ခေါင်းခွေးမချီနိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ အောက်ခြေအဆင်ဆင့် အဖွဲ့ခွဲတွေဖွဲ့ကြမယ်ဆိုရင်လည်း မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ကျေးရွာ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့ကြမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့က ဘယ်လုိုလူစားတွေကို ခန့်မှာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။ လက်ရှိမှာသူတို့လုပ်ရပ်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် အစုိုးရအသစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တာကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကြံ့ဖွံ့တွေ၊ အရင်ကလုပ်ခဲ့ ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေကိုပဲ ပြန်ခန့်တာကို တွေ့ရတယ်။
အဲသည်တော့ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ …မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ပြသနာတွေ ဖြစ်နေတာကို အမြဲတန်းကြားနေရတယ်။ ကျေးရွာက လူကြီးကအလွဲသုံးစားလုပ်တာ၊ ရွာသားတွေကို နှိပ်စက်တာ၊ မတရားလုပ်တာတွေ အမြဲကြားနေရတယ်။အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်မှာ အုပ်ချူပ်နေတဲ့သူတွေဟာ အဲသည်လို အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သူတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကျုးလွန်သူတွေဖြစ်နေရင် အဲသည်လူတွေကိုဘယ်လို တိုင်ကြားအရေးယူမှာလဲ။ တိုင်ကြားတဲ့ နေရာမှာလည်းပဲလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကအောက်ခြေမှာ ခန့်ထားတဲ့သူတွေကလည်းလူ့အခွင့်အရေးချိူးဖောက်တဲ့နေရာမှာ ရှေ့တန်းကပါခဲ့တဲ့ သူတွေဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ။ ဒါတွေကို စဉ်းစားရမယ့် အချက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
- ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အထက်ကတင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေရုံတင်သာမကဘဲ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်မှာလည်းပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဆီမှာ လူတဦးချင်းစီမှာလည်း တာဝန်ရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။ လက်ရှိမှာ အာဏာပိုင်တွေ အုပ်ချုပ်သူတွေ အဆင့်ဆင့်မှာဒီမုိုကရေစီစနစ်ကို လေ့ကျင် ထိန်းသိမ်းလိုတဲ့ တန်ဖိုးထားလိုတဲ့သူတွေအများအပြားရှိနေပြီလား။
- အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားမှာ ပါဝင်တဲ့ရဲတွေ၊ မီးသတ်တွေ၊ စစ်သားတွေ၊ စစ်သားဟောင်းတွေ၊ စည်ပင်သာယာရေးက၀န်ထမ်းတွေစတဲ့လူထုအရေးကို ဆောင်ရွက်နေရမယ့် ကူညီရမယ့်သူတွေကို ကြည့်လိုက်လုို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုယ်တုိုင်က အာဏာရှင်ပေါက်စလေးတွေ ဖြစ်နေရင် ဟန်မကျဘူး။ မလွယ်ဘူး။သူတို့တွေကိုယ်တုိုင်က လူတွေဆီက အနိုင်ကျင့်ပြီး ငွေတောင်းတာမျိူး၊အပုိုင်စီးတာမျိူးတွေ လုပ်နေတာတွေ ကြားနေ မြင်နေရတယ်။ ပြောရလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂ ထောင်ကျော်ကို လွှတ်ပေးလိုက်လို့ တိုင်းပြည်မှာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာမယ်တို့၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့က အာမခံချက် ဘယ်လိုပေးမှာလဲတို့တွေမေးခွန်းထုတ်နေတာတွေ ခဏထားလိုက်ပါဦင်္း။ အခု မြန်မာပြည်ဒေသအနှံ့ အလွှာတိုင်းမှာအာဏာရှင်ပေါက်စတွေကို ဘယ်လိုမျိူး ထိန်းသိမ်း ဖြေရှင်းကြမှာလဲ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂ ထောင်ကို လွှတ်ပေးဖို့က ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်မှာလက်ရှိ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်နဲ့ အလွှာတိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အာဏာရှင်ပေါက်စတွေ၊လူ့အခွင့်အရေး ချိူးဖောက်မှုတွေ လုပ်နေတာတွေ ဖြစ်ပွားနေတာတွေက အရေးတကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။
- ထိပ်ပိုင်းအပေါ်ပိုင်းကတော့ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ကိုပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်ပြီ၊ ဒါဆိုရင် ပြည်သူတွေမှာ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရပြီပေါ့လို့ပြောရုံတင် ပြောလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့ ဆရာ။
- ဟုတ်တယ်။ အပေါ်ကတော့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့ လွှတ်တော်ထဲမှာ၊ ၀န်ကြီးအဆင့်မှာ ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် အောက်ခြေမှာကျတော့ ဥပမာအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အင်တာဗျူးကိုထည့်ခွင့်မပေးဘူး၊ ဆောင်းပါးကို စာပေစိစစ်ရေးက ဆင်ဆာဖြတ်နေတယ်။ ပြောနေတာက တမျိူး၊လုပ်နေတာက တမျိူးဖြစ်နေတာတွေ တွေ့နေရတယ်။ အာဏာရှင်ပေါက်စနလေးတွေက နေရာတိုင်းမှာကြီးစုိုးလွှမ်းမိုးပြီးတော့ သူတို့လုပ်ချင်တာတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိူးဖောက်တာတွေလုပ်နေတာတွေ မြင်နေရတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ အခုလို လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ ပြည်သူတွေက တကယ်ကို သွားရောက်ပြောကြား တိုင်ပင်တင်ပြလို့ ရပြီလား။ ဒါကို ကျနော်တို့အနေနဲ့က မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
- ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေ။ ။
ဧရာဝတီ Monday, 12 September 2011 17:10 အယ်ဒီတာ့အာဘော်